အနိမျ့အမွငျ့ အတကျအကမြားနဲ့ ရျောနယျဒိုရဲ့ ၂၀၂၀ ခရီးစဉျ…. – Premier League Special
“အရမျးကောငျးတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှနေဲ့ ကြှနျတျော အမွဲတမျး အမှတျရနစေမေယျ့ အားလပျခြိနျလေးတဈခုပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့ အခြိနျကောငျးတှေ ရခဲ့တာဖွဈပွီး မိသားစု၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဒူဘိုငျးက နှေးထှေးတဲ့ ပရိသတျတှဆေီကနေ အမှတျတရကောငျးတှေ ရခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုတော့ အလုပျပွနျကွိုးစားရမယျ့အခြိနျ ရောကျလာပါပွီ။ အားအငျအပွညျ့နဲ့ ပွနျနိုငျဖို့ ဘကျထရီအပွညျ့ ဖွဈနပွေီး အရငျကထကျ ပိုပွီး တကျကွှနပေါပွီ။ ဂြူဗငျတဈအတှကျ ရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ရာသီတဈခုရဲ့ မှတျတိုငျက အီတလီမှာတငျ မကဘဲ ဥရောပအတှကျပါ ပါဝငျပါတယျ။” ဆိုတဲ့စာကို ရျောနယျဒိုက သူ့ရဲ့ အငျစတာဂရမျမှာ ရေးတငျထားခဲ့ပါတယျ။ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျဒိုတဈယောကျ Globe Soccer Awards ဆုပေးပှဲကို တကျရောကျရငျး ခရစ်စမတျမတိုငျခငျ ဒူဘိုငျးကို ရောကျရှိနခေဲ့ပါတယျ။
ဒူဘိုငျးဆိုတာကတော့ နာမညျကြျောတှအေတှကျ မစိမျးတဲ့ နရောတဈခု ဖွဈပွီး ရာသီဝကျနားရကျ၊ အားလပျရကျ၊ ရာသီကုနျအားလပျရကျတှမှော ခရီးသှားတှနေဲ့ စညျကားတတျတဲ့နရော ဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ ဒူဘိုငျးမငျးသား ရှိတျ ဟမျဒနျနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ ဆကျဆံရေးမြိုး ရှိပွီး ပျေါတူဂီသား အတူတူ ပွေးစကျမှာ လကေ့ငျြ့နတေဲ့ ဗီဒီယိုကို လူမှုကှနျရကျမှာ တငျထားခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ ၂၇ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဆုပေးပှဲမှာ ရျောနယျဒိုက ဆယျစုနှဈ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို ဆှတျခူးခဲ့ပွီး ဒူဘိုငျး တျောဝငျမိသားစုရဲ့ လေးစားမှု၊ အပွုအစု ကောငျးမှနျမှု၊ နှေးထှေးပြူငှာမှုတှအေပျေါ ကြေးဇူးတငျစကား ဆိုခဲ့ပါတယျ။
၂၀၂၀ခုနှဈကတော့ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ခံခဲ့ရပွီး ရျောနယျဒိုလညျး လူသားတဈယောကျ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပိုးကူးစကျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ ကိုဗဈကူးစကျခံရခြိနျအတှငျး positive ၂ကွိမျအထိ ပွခဲ့တာကွောငျ့ ၂ပတျကွာ ကှာရနျတငျး ဝငျခဲ့ရပွီး ဘာစီလိုနာနဲ့ ခနျြပီယံပထမအကြော့ ပှဲစဉျကို လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။
ပျေါတူဂီအသငျးမှာ ကစားနရေငျး ရျောနယျဒိုတဈယောကျ ကိုဗဈကူးခံခဲ့ရတာ ဖွဈကာ သူမပါနိုငျတဲ့ နောကျတဈပှဲကို ကှငျးဘေးက အိမျကနေ အားပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီနှဈမှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ သှငျးဂိုး (၇၅၀) ပွညျ့မွောကျသှားခဲ့သလို၊ နိုငျငံအသငျးအတှကျသှငျးဂိုး (၁၀၂)ရောကျရှိနခေဲ့ပွီး အမြားဆုံးသှငျးယူထားသူအလီဒါယီရဲ့စံခြိနျကိုမီဖို့(၇)ဂိုးသာလိုပါတော့တယျ။
ဒါပမေဲ့ စပီဇီယာနဲ့ ပှဲမှာ ပွနျလာနိုငျခဲ့ပွီး ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲ ဂြူဗငျတပျဈကို သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ဆှဲတငျပေးခဲ့ပါတယျ။
ကိုဗဈကူးစကျခံရအပွီးမှာ ရျောနယျဒိုက ခဈြသူ ဂြျောဂြီနာ၊ ကလေးတှနေဲ့အတူ ဇိမျခံသင်ျဘောပျေါက ပုံတဈပုံကို တငျခဲ့ပွီး သူပွနျလာပွီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို အသိပေးခဲ့ပါတယျ။
အောကျတိုဘာလတုနျး ရျောနယျဒိုတဈယောကျ အိမျကို သူခိုးကပျခွငျး ခံခဲ့ရတာကလညျး ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားခဲ့တဲ့ သတငျးတဈပုဒျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ပျေါတူဂီနိုငျငံ ဖနျခယျြမွို့နယျက ရျောနယျဒိုရဲ့ နအေိမျဟာ ဖောကျထှငျခံခဲ့ရပွီး ကိုယျရေးကိုယျတာ ပစ်စညျးတှေ ခိုးယူခံခဲ့ရပါတယျ။
အဆိုပါ နအေိမျဟာ မာဒဲရာမှာ တညျရှိပွီး ၇ထပျမွငျ့တဲ့ အဆောကျအအုံဖွဈကာ သူခိုးခိုးခံရခြိနျမှာ ရျောနယျဒိုက နိုငျငံတကာပှဲ ကစားနပွေီး ဂြျောဂြီနာက ပဲရဈက ဖကျရှငျရှိုးတဈခုကို ရောကျနခြေိနျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ယခုနှဈအတှငျး အတှအေ့ကွုံသဈတှေ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ရျောနယျဒိုဟာ ခရစ်စမတျနမှေ့ာတော့ မိသားစုနဲ့အတူ ရှိနကွေောငျး ခရစ်စမတျသဈပငျရှမှေ့ာ ခဈြသူ၊ ကလေးငယျတှနေဲ့ အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံကို တငျခဲ့ပါတယျ။
အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျများနဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ၂၀၂၀ ခရီးစဉ်….
“အရမ်းကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော် အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေစေမယ့် အားလပ်ချိန်လေးတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော့် အချိန်ကောင်းတွေ ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဒူဘိုင်းက နွေးထွေးတဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကနေ အမှတ်တရကောင်းတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အလုပ်ပြန်ကြိုးစားရမယ့်အချိန် ရောက်လာပါပြီ။ အားအင်အပြည့်နဲ့ ပြန်နိုင်ဖို့ ဘက်ထရီအပြည့် ဖြစ်နေပြီး အရင်ကထက် ပိုပြီး တက်ကြွနေပါပြီ။ ဂျူဗင်တစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ရာသီတစ်ခုရဲ့ မှတ်တိုင်က အီတလီမှာတင် မကဘဲ ဥရောပအတွက်ပါ ပါဝင်ပါတယ်။” ဆိုတဲ့စာကို ရော်နယ်ဒိုက သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ ရေးတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုတစ်ယောက် Globe Soccer Awards ဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ရင်း ခရစ္စမတ်မတိုင်ခင် ဒူဘိုင်းကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းဆိုတာကတော့ နာမည်ကျော်တွေအတွက် မစိမ်းတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ရာသီဝက်နားရက်၊ အားလပ်ရက်၊ ရာသီကုန်အားလပ်ရက်တွေမှာ ခရီးသွားတွေနဲ့ စည်ကားတတ်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဟာ ဒူဘိုင်းမင်းသား ရှိတ် ဟမ်ဒန်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ရှိပြီး ပေါ်တူဂီသား အတူတူ ပြေးစက်မှာ လေ့ကျင့်နေတဲ့ ဗီဒီယိုကို လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုပေးပွဲမှာ ရော်နယ်ဒိုက ဆယ်စုနှစ် အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ဒူဘိုင်း တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ လေးစားမှု၊ အပြုအစု ကောင်းမွန်မှု၊ နွေးထွေးပျူငှာမှုတွေအပေါ် ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၀ခုနှစ်ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံခဲ့ရပြီး ရော်နယ်ဒိုလည်း လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုးကူးစက်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရချိန်အတွင်း positive ၂ကြိမ်အထိ ပြခဲ့တာကြောင့် ၂ပတ်ကြာ ကွာရန်တင်း ၀င်ခဲ့ရပြီး ဘာစီလိုနာနဲ့ ချန်ပီယံပထမအကျော့ ပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအသင်းမှာ ကစားနေရင်း ရော်နယ်ဒိုတစ်ယောက် ကိုဗစ်ကူးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ကာ သူမပါနိုင်တဲ့ နောက်တစ်ပွဲကို ကွင်းဘေးက အိမ်ကနေ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ သွင်းဂိုး (၇၅၀) ပြည့်မြောက်သွားခဲ့သလို၊ နိုင်ငံအသင်းအတွက်သွင်းဂိုး (၁၀၂)ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး အများဆုံးသွင်းယူထားသူအလီဒါယီရဲ့စံချိန်ကိုမီဖို့(၇)ဂိုးသာလိုပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ စပီဇီယာနဲ့ ပွဲမှာ ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဆွဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရအပြီးမှာ ရော်နယ်ဒိုက ချစ်သူ ဂျော်ဂျီနာ၊ ကလေးတွေနဲ့အတူ ဇိမ်ခံသင်္ဘောပေါ်က ပုံတစ်ပုံကို တင်ခဲ့ပြီး သူပြန်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလတုန်း ရော်နယ်ဒိုတစ်ယောက် အိမ်ကို သူခိုးကပ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာကလည်း ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ဖန်ချယ်မြို့နယ်က ရော်နယ်ဒိုရဲ့ နေအိမ်ဟာ ဖောက်ထွင်ခံခဲ့ရပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပစ္စည်းတွေ ခိုးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ နေအိမ်ဟာ မာဒဲရာမှာ တည်ရှိပြီး ၇ထပ်မြင့်တဲ့ အဆောက်အအုံဖြစ်ကာ သူခိုးခိုးခံရချိန်မှာ ရော်နယ်ဒိုက နိုင်ငံတကာပွဲ ကစားနေပြီး ဂျော်ဂျီနာက ပဲရစ်က ဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုကို ရောက်နေချိန် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်း အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ခရစ္စမတ်နေ့မှာတော့ မိသားစုနဲ့အတူ ရှိနေကြောင်း ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ရှေ့မှာ ချစ်သူ၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ်။
ကာဗာနီကို အင်ျဂလနျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမှ ပွဈဒဏျခမြှတျ ။